TrueNAS SCALE, iyo FreeNas inoshandisa Linux uye yakavakirwa paDebian 11 | Linux Vakapindwa muropa
Nhasi iXsystems, iyo kambani iri kumashure kweFreeNAS uye TrueNAS yakaratidzwa un chirongwa chitsva chaizivikanwa nezvikonzero zvakati wandei, «TrueNAS SCALE» izvo inotarisa pazvinhu zvinotyisa, zvakashandurwa, zvinoshanda-zvirimo midziyo, nyore-kugadzirisa zvigadziriso.
Iyi purojekiti inozivikanwa nekuti pachinzvimbo che TrueNAS SCALE ichivakirwa paFreeBSD Kufanana nezvimwe zvese zvekupa kwavo, chikuva chakasiyana. Kutinhira SCALE ichashandisazve akawanda aripo eIxsystems maturusi akavakirwa TrueNAS, asi kumashure kune Debian GNU / Linux 11.
Izvo zvinofanirwa kuyeukwa kuti mwedzi miviri yapfuura, iXsystems yakazivisa kubatanidzwa kwekuparadzirwa kwemahara kweFreeNAS neiyo purojekiti yekutengesa TrueNAS, ichiwedzera kugona kweFreeNAS kumakambani, uye zvakare yakasarudza kumisa kuvandudzwa kweiyo TrueOS chirongwa (chekare PC-BSD) .
Sezvineiwo, muna 2009, kugoverwa kweOpenMediaVault, iyo yakaendeswa kuLinux kernel uye hwaro hwepakeji yeDebian, yakanga yatoparadzaniswa neFreeNAS.
Nezve TrueNAS SCALE
Hunhu hunomira kunze kweichi chitsva chirongwa "TrueNAS SCALE" yaive iyo uchishandisa Linux kernel uye iyo Debian 11 package base (Kuyedza), nepo zvese zvigadzirwa zvekambani zvakapfuura, kusanganisira TrueOS (yaimbova PC-BSD), zvaive zvakavakirwa paFreeBSD.
TrueNAS SCALE chirongwa chitsva chekambani icho yakagadzirirwa kuzadza musiyano wakakura muIXsystems yekuchengetedza portfolio.
Isu tinofara kuzivisa vanogadzira kuti kodhi yekodhi ye TrueNAS SCALE yave kuwanikwa paGitHub uye mukusimudzira kwakanyanya. Munguva yekota inotevera, isu tinokupa iwe ruzivo rwakadzama pamusoro pekuvakwa, kurodha pasi zvinongedzo kumifananidzo yekumisikidza, uye nerumwe ruzivo rwekuti ungaita sei mukubatana
Isu tiri parizvino kushanda nesimba kupedzisa zvimwe zveakakosha maficha mune yekutanga-nguva mugadziri preview mufananidzo.
Ichi chifananidzo chehusiku chinobvumira vanogadzira nharaunda uye vateereri vekutanga kuona tekinoroji kurova matai uye kuve vanobatanidzwa mumatanho ekutanga ekugadzirwa kwechinhu ichi chitsva. SCALE ichave chirongwa chekuvandudza kune iyo yasara ye2020 neyakagadzirirwa kuvhurwa mu2021.
Tiri kutanga boka idzva rekukurukura nezvechirongwa cheESCALA futi. Kana iwe kana sangano rako uchishuvira kupa muprojekiti ine izvi zvinangwa, titevere isu uye utaure muboka rehurukuro uye isu ticharamba tichikuzivisa iwe.
Nguva ZFS yakagadzirirwa kuve huru yekuwedzera mhinduro, yakawanda yemusika iri kufamba yakanangana nekuwedzera uye kambani inoda kupihwa.
Iri ndiro danho rechipiri rakakosha riri kutorwa nekambani svondo rino kutanga kusimbisa FreeBSD, yakakosha sezvo iri iyo inobatsira zvikuru muchirongwa cheFreeBSD.
Nechinangwa chekugadzira kugovera kutsva, Inodaidzwa kuti kuwedzera kukura, kurerutsa manejimendi manejimendi, shandisa midziyo yeLinux, uye tarisa pakuvaka software-yakatsanangurwa mafomati.
SaFreeNAS, TrueNAS SCALE yakavakirwa paZFS faira system muOpenZFS kuitiswa kweprojekti (ZFS PaLinux inokurudzirwa seyakajairika kuitiswa kweZFS). TrueNAS SCALE inoshandisa zvakare zvishandiso zvakagadzirwa neIxsystems yeFreeNAS uye TrueNAS 12.
Ichowo zvakare kuvandudzwa uye kutsigirwa kweFreeNAS, TrueNAS CORE uye TrueNAS Enterprise yakavakirwa paFreeBSD ichaenderera pasina shanduko.
Pfungwa yakakosha yekutanga ndeyekuti OpenZFS 2.0 ichapa rutsigiro rweLinux uye FreeBSD, Izvi zvinovhura musuwo wekuyedza kugadzira maturusi eNAS epasirese asina kusungirwa kune yakasarudzika sisitimu yekushandisa, uye inokutendera iwe kutanga kuyedza neLinux.
Kushandisa Linux kunokutendera kuti ushandise mamwe mazano asingasvikike neFreeBSD. Semagumo, MaharaBSD uye Linux-based mhinduro ichagara pamwe chete uye ivo vanozokwenenzverana, vachishandisa yakajairika kodhi base reti teki.
Iyo purojekiti parizvino iri kuvandudzwa uye iyo TrueNAS SCALE yakatarwa yekuvaka zvinyorwa inogona kuve tsvaga paGitHub.
Pakati pechikamu chinotevera, zvakarongerwa kuburitsa ruzivo rwakadzama pane zvivakwa uye unopa zvinowedzeredzwa magungano ebvunzo kuti uzive nezvenzira yekuvandudza.
Kuburitswa kwekutanga kwe TrueNAS SCALE kwakarongerwa 2021.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » TrueNAS SCALE, iyo FreeNas inoshandisa Linux uye yakavakirwa paDebian 11
MANUEL PEREZ akadaro
Ese maNAS ese ezvokutengeserana (Qnap, Synology nezvimwewo) uye mahara zvakashanduka kuita midziyo yekushandisa uye ipapo Freenas anga asara kumashure, pamwe ndosaka kuburitswa kweiyi Truenas Scale ...
Pindura MANUEL PEREZ